New ASUS Z490 ROG Strix Series neTUF Gaming Motherboards - iGamesNews
I-ASUS imemezele ngo-Ephreli 30 wokugcina uhlu olusha lwama-mamabhodi e-Z490 aklanyelwe ukukhombisa amandla aphelele wesizukulwane sakamuva se-Intel® Core ™ processors.
Ama-motherboards we-ASUS Z490 ochungechunge maduze ahlanganiswe yi-ASUS ne-ROG H470, B460, nama-mamabhodi e-H410, okunikeza abasebenzisi izinketho eziningi ezilingana nezidingo zabo nezabelomali. Ngemininingwane engaphezulu kulayini ophelele we-ASUS Z490, sicela uvakashele ikhasi le-ASUS Z490.
Kulesi sinothi sesibili, sinikeza imininingwane ngezinzuzo, inzuzo nezimpawu zeNew ROG Strix Z490 neTUF Gaming Z490 Series.
I-ROG Strix Z490-E ne-Z490-F Gaming
Ngezigaba zamandla eziyi-14 + 2 kanye no-12 + 2 ngokulandelana, i-Strix Z490-E Gaming ne-Strix Z490-F Gaming zikulungele ukubuyisa kalula ama-10th Gen Intel Core CPUs wakamuva. Leli bhangqa lamabhodi omama lifaka i-heatsink ngepayipi lokushisa elakhelwe ngaphakathi ukupholisa izigaba zamandla ne-heatsink yesibili ukupholisa i-chipthi yeZ490. I-PCB yayo eyizingqimba eziyisithupha kanye neProCool II izixhumi zamandla eziwasizayo ziqinisekisa ukulethwa kwamandla okuthe xaxa nangokuzinzile. I-Strix Z490-E Gaming ine fan ongayikhetha engaxhuma kwi-heRink ye-VRM ukuthola ukupholisa okwengeziwe ngesikhathi sokuphindisela. Izine ezine-DIMM Slots zisebenzisa i-top topology yethanga lemvamisa ephakeme futhi ingashayela i-RAM ngejubane le-4600 MHz nangale.
Abalawuli be-Intel I225-V bahlinzeka ngejubane eliyisisekelo le-Ethernet efinyelela ku-2,5 Gbps. I-Strix Z490-E Gaming isakhelwe ngaphakathi i-WiFi 6 nokuxhumana kwe-Bluetooth, kuyilapho i-Strix Z490-F Gaming ine-M.2 E-key slot yemodi yokuzikhethela ye-WiFi. Kunezinhlobo ezimbili zokubeka okukhona kwe-M.2 ezitholakalayo ze-NVMe SSDs, futhi lezo Slots zitholakala ngaphansi kwe-heatsinks ukuqinisekisa ukusebenza okungaguquki.
Uhlu olubanzi lwamachweba we-USB lungatholakala kuphaneli engemuva lawo womabili ama-motherboards, kuthi iStrix Z490-E Gaming ibe nesixhumi se-USB 3.2 Gen 2 Type C ® kwiphaneli yayo yangaphambili. Ukuxhumana okuphezulu kwe-Thunderbolt ™ 3 kuyatholakala futhi ngokuzikhethela ngokusebenzisa i-ThunderboltEX 3-TR khadi.
I-ROG Strix Z490-I Gaming
I-ROG Strix Z490-I Gaming mini-ITX motherboard ine-PCB eyindilinga eyisishiyagalombili yokuqina kwesibonakaliso nokuqothuka kokushisa okufakwayo futhi inamandla we-8 + 2-isigaba se-VRM ngokupholisa okusebenzayo kokubamba ngokweqile.
Yize sinobukhulu bayo, iStrix Z490-I Gaming ingalungisa imishini emibili ye-M.2, futhi ingatholakala ngaphansi kokushisa okushisayo ukuqinisekisa ukupholisa okulingene ngaphakathi kwezindawo ezakhiwa yizingcingo ezincane. Kutholakala amachweba we-USB ayi-13, kufaka phakathi i-USB 3.2 Type 2 Type A nesixhumi sohlobo C kwiphaneli elingemuva.
I-ROG Strix Z490-H Gaming
I-ROG Strix Z490-H Gaming inama-heatsink amakhulu amboza i-chipset nezigaba zamandla ezihlanganisiwe eziyi-12 + 2 ze-VRM. Isikhala sayo sokukhumbula singamukela ama-DIMM ngesivinini se-4600 MHz, futhi.
Izindawo ezintathu ezibalulekile ze-PCIe Slots ebhodini lomama ziyaqiniswa nge-ASUS SafeSlot slot ukuze kuqiniswe ukuqina uma abasebenzisi bedinga ukuhambisa noma ukuhambisa uhlelo lwabo ngekhadi lehluzo noma ikhadi lokunwebisa elifakiwe. Enye yezindawo zayo ezimbili ezisebenza njenge-M.2 Slots ine-heatsink ezinikezele, kuyilapho isisulu sesithathu se-M.2 E-key iyatholakala ukusingatha imodyuli ye-WiFi 6. Uma une-2,5 Gb ye-Ethernet.
Ubuchwepheshe obwedlula bonke kanye nobuchwepheshe be-Artificial Intelligence Networks buvumela abasebenzisi ukuthi bacindezele imikhawulo uma kuziwa ekuqhutshweni komdlalo noma ekusebenzeni. Kodwa ukupholisa akuyona inkinga kuStrix Z490-H Gaming nezinhloko zayo eziyisithupha zabalandeli, inhloko yepompo epholile ye-AIO liquid, kanye nokufakwa kwe-sensor sensor. Ukupholisa i-Aio kuyatholakala futhi ukulawula umsindo wabalandeli.
Ngokungabonakali, abasebenzisi bangenza ngokwezifiso isakhiwo sabo nge-Aura Sync kanye ne-RGB amakhanda strip e-LED.
I-ROG Strix Z490-A Gaming
I-ROG Strix Z490-A Gaming ibamba iso ngokuphelelwa kwayo okumhlophe, futhi lokho kufakazelwa yimigqa yemigqa ye-RGB ye-RGB. Ngokuqondene nalezi zinsolo, ziyefana neStrix Z490-H, ngaphandle kokwehluka okuncane emachwebeni angemuva e-USB, kanye nokutholakala kwesixhumi sangaphambili se-USB Type-C isixhumi.
I-ROG Strix Z490-G Gaming (i-Wi-Fi)
I-ROG Strix Z490-G Gaming (i-Wi Fi) isiza kubathakazeli be-MicroATX ngezimpawu zayo ze-gamer nokuxhumana okubanzi. Yize incane kakhulu kunezingane zakubo ze-ATX, iStrix Z490-G Gaming (iWi Fi) iyaqhubeka nokufaka idizayini yamandla weqembu le-12 + 2 kanye namamaki amane we-DIMM.
Ukuxhumana kuza nge-super okusheshayo i-2.5Gb Ethernet ne-WiFi 6. Slots ezimbili ze-PCIe x16 kanye ne-PCIe x1 slot eyodwa ezokwazi ukuhlalisa amakhadi wokunwebeka, kuyilapho kukhona ukubekeka okubili kwe-M.2 kwesitoreji se-NVMe esinejubane eliphezulu. I-heatsink esigabeni sokuqala se-M.2 igcina i-SSD ipholile ngaphansi kwemithwalo eqhubekayo.
I-TUF Gaming Z490-Plus / TUF Gaming Z490-Plus (Wi – Fi)
I-TUF Gaming Z490-Plus ine-PCB enemigqa eyisithupha yokuqothula ukushisa okungcono kanye nokwethembeka kwesibonakaliso, kanye nomklamo wamandla wesigaba se-12 + 2 ngezakhi ze-DrMOS. Ama-TUF capacitors anokubekezelela ukushisa okuphezulu kanye nokufakwayo okuqinile okuyisisekelo se-ProCool. Kunezindawo ezimbili ezikhona ze-PCIe x16 Slots ezitholakalayo, eyodwa enomklamo oqiniselwe insimbi we-ASUS SafeSlot. Kunezinhlobo ezimbili zokubeka kwe-M.2 kwe-NVMe SSDs, esinye sazo esimbozwe yi-heatsink ukugcina ukusheshisa kwe-hot at bay.
Iphaneli engemuva le-I / O inamachweba we-USB 3.2 Gen 2 anezixhumi zohlobo A nohlobo C, futhi lokho kuhlanganiswa yisihloko sephaneli sangaphambili seGen 2. Isihloko se-onboard Thunderbolt 3 siyatholakala kubasebenzisi abafuna ukwengeza ikhadi. I-ThunderboltEX 3-TR.
Ibhodi elijwayelekile le-TUF Gaming Z490-Plus linesilawuli se-Intel Gigabit Ethernet esine-TUF LanGuard circry ukuyivikela ekuphumeni kwe-electrostatic. I-TUF Gaming Z490-Plus (iWiFi) enikwe amandla ubuchwepheshe obungenawaya, ine-WiFi 6 ne-Bluetooth 5.1 yokuxhumana.
I-Z490-Plus ifaka umsindo ohlanganisiwe weRealtek S1200A oxhasa i-DTS® inkambiso yomsindo ozungezile ongaqondaniswa nezinhlobo ezithile zomdlalo.
Imigqa emibili ye-RGB ye-LED eceleni kwesokudla kwedeshi ingenziwa ngezifiso nge-Aura Sync. Kukhona futhi izihloko ezintathu ebhodini, kufaka i-Gen 2 unhlokweni, yabasebenzisi abafuna ezinye izinketho zokuzenzela ngokwezifiso.
Tags:ASUS gaming motherboards neTUF ROG series Strix Z490
How to Fill Ink Cartridges on Printer
SMT vs SIMD vs SIMT, what's the difference?